Vadzidzi vaJesu Vokutanga | Upenyu hwaJesu
VADZIDZI VAJESU VOKUTANGA VANOTANGA KUFAMBA NAYE
Apedza mazuva 40 ari murenje uye asati adzokera kuGarireya, Jesu anodzokera kuna Johani, akanga amubhabhatidza. Jesu achiri kwakadaro uko, Johani anomunongedzera otaurira vamwe varipo kuti: “Onai, Gwayana raMwari rinobvisa chivi chenyika! Uyu ndiye wandakati nezvake, Shure kwangu kunouya munhu akanditangira, nokuti akavapo ini ndisati ndavapo.” (Johani 1:29, 30) Kunyange zvazvo Johani ari iye akatangira Jesu kuzvarwa, anoziva kuti Jesu mukuru kwaari nokuti akatangira kurarama kudenga.
Mavhiki akapfuura, paya pakauya Jesu kuzobhabhatidzwa, zvinoita sokuti Johani akanga asina chokwadi kuti Jesu ndiye aizova Mesiya. Anobvuma kuti: “Kunyange ini ndakanga ndisingamuzivi, asi zvandakauyira ndichibhabhatidza nemvura zvaiva zvokuti aratidzwe pachena kuna Israeri.”—Johani 1:31.
Johani anoenderera mberi achiudza vateereri vake zvakaitika paakabhabhatidza Jesu: “Ndakaona mudzimu uchiburuka senjiva uchibva kudenga, uye wakaramba uri pamusoro pake. Kunyange ini ndakanga ndisingamuzivi, asi Iye chaiye akandituma kuzobhabhatidza nemvura akati kwandiri, ‘Munhu waunoona mudzimu uchiburukira paari woramba uripo, iyeyu ndiye anobhabhatidza nomudzimu mutsvene.’ Ini ndakauona, uye ndakapupura kuti uyu ndiye Mwanakomana waMwari.”—Johani 1:32-34.
Mangwana acho, Johani aine vamwe vadzidzi vake vaviri, Jesu anouya kwaari. Johani anoti: “Onai, Gwayana raMwari!” (Johani 1:36) Vadzidzi ava vanobva vatevera Jesu. Mumwe wavo anonzi Andreya. Mumwe wacho anonziwo Johani, uye anofanira kunge ari iye akanyora chiitiko ichi. Kunenge kuti Johani munin’ina waJesu wekwamainini, sezvo ari mwanakomana waSarome. Sarome anofanira kunge ari munin’ina waMariya, uye murume wake ndiZebhedhi.
Jesu anocheuka otarisa Andreya naJohani vari kumutevera obvunza kuti: “Muri kutsvakei?”
Vanomubvunza kuti, “Rabhi, muri kugara kupi?”
Jesu anovapindura kuti, “Uyai, muone.”—Johani 1:37-39.
Izvi zvinoitika kuma4 dzezuva rovira, uye Andreya naJohani vanopedzisa zuva iroro vaina Jesu. Andreya anofara zvokufara zviya zvokuti anozotsvaka mukoma wake Simoni, uyo anonziwo Petro, omuudza kuti: “Tawana Mesiya.” (Johani 1:41) Andreya anoenda naPetro kuna Jesu. Zvinozoitika zvinoratidza kuti Johani anotsvakawo mukoma wake Jakobho oenda naye kuna Jesu; asi Johani haana kunyora nezvazvo munhoroondo yake.
Zuva rinozotevera Jesu anowana Firipi, uyo anobva kuBhetisaidha. Guta iri riri pedyo nemahombekombe ekuchamhembe eGungwa reGarireya uye ndiko kunobva Andreya naPetro. Jesu anoti kuna Firipi: “Iva muteveri wangu.”—Johani 1:43.
Firipi anobva aenda kunotsvaka Natanaeri uyo anonziwo Bhatoromeyo, oti kwaari: “Tawana uya akanyorwa nezvake naMosesi, muMutemo, uye akanyorwa nezvake neVaprofita, iye Jesu, mwanakomana waJosefa, wokuNazareta.” Natanaeri haana chokwadi nazvo, saka anoti kuna Firipi: “Pane chinhu chakanaka chingabva muNazareta here?”
Firipi anoti kwaari: “Uya uone.” Jesu anoona Natanaeri achiuya obva ati: “Onai, muIsraeri zvechokwadi, maari hamuna kunyengera.”
“Imi munondiziva sei?” Natanaeri anobvunza.
Jesu anomupindura: “Firipi asati akushevedza, pawanga uri pasi pomuonde, ndakuona.”
Natanaeri anopindura achishamisika: “Rabhi, ndimi Mwanakomana waMwari, ndimi Mambo waIsraeri.”
“Wava kutenda here nokuti ndakuudza kuti ndakuona uri pasi pomuonde?” Jesu anobvunza. “Uchaona zvinhu zvikuru kupfuura izvi.” Jesu anozovimbisa kuti: “Chokwadi, chokwadi ndinoti kwamuri, Muchaona denga richizaruka uye ngirozi dzaMwari dzichikwira nokuburukira kuMwanakomana womunhu.”—Johani 1:45-51.
Izvi zvichangoitika, Jesu nevadzidzi vake vaachangowana vanobva muruwa rweJodhani voenda kuGarireya.
Vadzidzi vaJesu vokutanga ndivanaani?
Petro, akauya sei kuna Jesu, uye Jakobho anofanira kunge akauyawo sei?
Chii chinoita kuti Natanaeri anyatsobvuma kuti Jesu Mwanakomana waMwari?
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Vadzidzi vaJesu Vokutanga